कसरी रेस्टुरा प्रबन्धक हुन | काम & USAHello देखि क्यारियर स्रोतहरू | USAHello
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू एक रेस्टुरेन्ट मा सजिलै चलिरहेको सबै राख्न. तिनीहरूले ग्राहकहरु सामना र कर्मचारी व्यवस्थापन. काम बारे जान्नुहोस् र तपाईं रेस्टुरा प्रबन्धक बन्न लिन आवश्यक कदम पत्ता.
CareerOneStop को फोटो सौजन्य
के हो रेस्टुरा प्रबन्धक?
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू रेस्टुरेन्ट मा निश्चित सबै यो हुनु पर्छ चलिरहेको छ बनाउन. रेस्टुरा प्रबन्धकको काम पनि खाना सेवा प्रबन्धक रूपमा जानिन्छ.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक लाख भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट संग, त्यहाँ राम्रो रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू लागि मांग छ. रेस्टुरेन्ट उद्योग मान्छे र खाना यी रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन गर्न ख्याल गर्ने मान्छे आवश्यक.
तलको तालिका तपाईं रेस्टुरा प्रबन्धक क्यारियर बारेमा केही तथ्य बताउँछ. यो भन्दा रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू र मालिकहरूले तलबाट सुरु र आफ्नो बाटो अप काम भनेर देखाउँछ. यो हालतमा तपाईं यो पेसा बाटोमा सुरु गर्न एक योग्यता आवश्यक छैन सक्छ. यो पनि धेरै मानिसहरू रेस्टुरेन्ट मा जब फेला र पनि अधिक जब भविष्यमा खोल्न हुनेछ गरेको शो.
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकको काम मा तपाईं के आशा गर्न सक्छौं?
रेस्टुरा प्रबन्धकको जिम्मेवारी
तिनीहरूले ग्राहकहरु र निरीक्षण कर्मचारी सामना, आपूर्ति, र गुणस्तर. व्यवस्थापकहरू ग्राहक सेवा मुद्दाहरू सामना र कर्मचारीहरु बीच समस्या समाधान. तिनीहरूले खाना गुणस्तर र सेवा राम्रो छ भनेर पक्का. यसबाहेक, तिनीहरूले रेस्टुरेन्ट खोल्छ अघि सबै तयार छ भन्ने सुनिश्चित. तिनीहरूले पनि खाना तयारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, आयोजन स्टक, र अर्डर आपूर्ति. अन्तमा, प्रबन्धकहरू कर्मचारीहरु सफा उपकरण बनाउन र सुरक्षा नियम पालना.
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू साक्षात्कार लागि जिम्मेवार छन्, राखने, र नयाँ कर्मचारी supervising. तिनीहरूले पनि बजेट र पेरोल व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ. कहिलेकाहीं, प्रबन्धकहरू पनि रेस्टुरेन्टको मालिकको छन्.
रेस्टुरेन्ट मालिक के बारेमा थप जान्नका लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू परिवार-स्वामित्व रेस्टुरेन्ट मा काम, छिटो-खाना र अन्य श्रृंखला रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट्स, र होटल. रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू सामान्यतया जहाँ तिनीहरूले प्रशासनिक कार्यहरू गर्न र दिन-को दिन आफ्नो गतिविधिहरु व्यवस्थापन एक कार्यालय छ.
नौ दस रेस्टुरेन्ट बाहिर भन्दा कम छ 50 कर्मचारीहरु. तर कार्यस्थल व्यस्त हुन सक्छ.
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू लागि तलब
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू 'तलब एक विस्तृत श्रृंखला कवर, तर तिनीहरू को एक औसत कमाउन $35,570 सालाना. वार्षिक तलब मा सुरु $19,865 र सम्म जाने $54,300. बाट दायरामा प्रतिघण्टा ज्याला $9.55 गर्न $26.09.
दयालु व्यक्ति को के राम्रो रेस्टुरेन्ट प्रबन्धक बनाउँछ?
तनाव अन्तर्गत सकारात्मक मनोवृत्ति राख्न सक्षम
राम्रोसँग काम र मान्छे व्यवस्थापन गर्न सक्षम
सुखद, विनम्र demeanor
विवरण को सावधान
चाँडै प्रतिक्रिया र बनाउन निर्णय गर्न सक्षम
कठिन परिस्थितिमा कूटनीतिक
ज्ञान र भान्सा र रेस्टुरेन्ट अभ्यासहरू को अनुभव
राम्रो संचार सीप
प्रशिक्षण र अनुभव
रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सबैभन्दा मान्छे एक रेस्टुरेन्ट मा प्रविष्टि-स्तर काम सुरु र आफ्नो बाटो अप काम. अन-द-काम अनुभव प्रशिक्षण पाउनको लागि सबै भन्दा साधारण तरिका हो.
रूपमा भरण प्रवेश-स्तर जब मानिसहरूलाई लागि उच्च मांग छ, तपाईं एक रेस्टुरेन्ट मा काम गरेर आफ्नो क्यारियर लागि प्रशिक्षण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. अन-द-काम अनुभव आफ्नो लक्ष्य पुग्न सबैभन्दा संभावना तरिका हो.
तपाईं एक रेस्टुरेन्ट मा काम को लागि लागू गर्न एकदम तयार के लाग्छ भने? केही काम केन्द्र र अन्य संगठनहरू निःशुल्क आधारभूत काम प्रशिक्षण प्रस्ताव. प्रशिक्षण केही रेस्टुरेन्ट जब र अन्य खाद्य सेवा जब मा जा शरणार्थी गर्न काम कौशल र आप्रवासी समावेश.
महत्त्वपूर्ण: तपाईं रेस्टुरेन्ट व्यापार को लागि आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त गर्न ठूलो शिक्षण शुल्क भुक्तानी गर्न आवश्यक छैन.
हामी सिकेका रूपमा, दस रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू नौ तल देखि आफ्नो बाटो माथि काम गरेर आफ्नो स्थिति पुग्यो. तिनीहरूले शायद प्रमाणीकरण छैन. तर प्रमाणपत्रहरू अगाडि प्राप्त गर्न मदत गर्न सक्छ. तपाईं चाँडै अग्रिम धेरै प्रतिबद्ध छ भने, तपाईं विद्यालय वा अनलाइन वर्ग उपस्थित द्वारा थप प्रशिक्षण प्राप्त गर्न सक्छन्. के तपाईं काम अनुभव प्राप्त र जीवित कमाउन छन् भनेर एकै समयमा भाग-समय पाठ्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यहाँ रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापनमा धेरै पाठ्यक्रम र विभिन्न प्रमाणपत्र हो. त्यहाँ चार वर्ष र दुई वर्ष कलेज मा प्रस्तावको आतिथ्य पाठ्यक्रम हो, पाक विद्यालय मा, र अन्य व्यावसायिक विद्यालय मा. तपाईं एल गर्न सक्छन्तपाईं विचार गर्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रम को विभिन्न प्रकारका बारेमा अनलाइन कमाउन:
को प्रकार पढ्न मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा प्रस्तावित रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन पाठ्यक्रम.
यस बारेमा जान्न ManageFirst कार्यक्रम, राष्ट्रिय भोजनालय संघ द्वारा सिर्जना प्रशिक्षण रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकहरू लागि पाठ्यक्रम. यो धेरै कलेज र विश्वविद्यालय मा प्रस्ताव गरिएको छ. यदि यो मा प्रस्ताव छ हेर्नुहोस् आफ्नो स्थानीय कलेज.
सरकार काम केन्द्र गरेको जाँच एलocal प्रशिक्षण अन्वेषक आफ्नो क्षेत्रको लागि.
केही मानिसहरू रेस्टुरा प्रबन्धक बनेर अघि दुई वर्ष व्यापार व्यवस्थापन र प्रशासन कार्यक्रममा भर्ना गर्न छनौट. तपाईं नजिकै एक समुदाय कलेज फेला.
तपाईं विचार गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन पाठ्यक्रम, तर सुनिश्चित यसलाई मान्यता प्राप्त छ.
केही वित्तीय सहायता रेस्टुरेन्ट व्यवसाय मा gettin योग्य लागि उपलब्ध छ. बारेमा थप जान्न रेस्टुरेन्ट करियर लागि छात्रवृत्ति.
तपाईंको आफ्नै व्यवसाय कसरी बनाउने
खाना सेवामा जब र करियर
काम विवरण फेला, तलब र अन्य जानकारी तपाईंको शहर वा राज्य मा रेस्टुरेन्ट / foodservice प्रबन्धकहरू
राष्ट्रिय भोजनालय संघ पकेट Factbook मा तथ्याङ्क हेर्न
रेस्टुरेन्ट प्रबन्धकको काम गर्न समान जब बारेमा जान्न